SEHATRY NY FITSABOANA :: Nasiam-panavaozana ny Ivon-toeram-pitiliana homamiadan'ny vehivavy • AoRaha
SEHATRY NY FITSABOANA Nasiam-panavaozana ny Ivon-toeram-pitiliana homamiadan’ny vehivavy
Nohatsaraina ny Ivon-toeram-pitiliana ny aretina homamiadana mpahazo ny vehivavy eo eo anivon’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na Hjra Ampefiloha. Notsidihin’ ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady sy ny mpikambana ao amin’ny governementa io Ivon-toeram-pitiliana aretina io, omaly. Anisan’ ny reny mpiahy sy nanolotra fitaovam-pitiliana ny aretina homamiadana mpahazo ny vehivavy toy ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza ny vadin’ny Filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina. « Tena raitra ary tsy mena mitaha amin’ ny ivon-toeram-pitiliana aretina homamiadana any ivelany ny eto amintsika », hoy ny Filoham-pirenena.
Maimaim-poana ny fitiliana ny aretina homamiadana eo amin’ny vehivavy eo anivon’io toeram-pitiliana vaovao etsy amin’ny Hjra io fa ny saram-pitsaboana ihany no handoavam-bola rehefa voatily fa mitondra ny aretina ilay olona.
Hisy fitiliana faobe
Efa misy ilay fitaovam-pitiliana mialoha ny homamiadana mba hanamorana ny fitsaboana mialoha na ilay antsoina hoe « Cryothérapie » ao amin’io ivon-toerana io, izay avy any amin’ny vadin’ ny Filoham-pirenena.
Ny governemanta malagasy miaraka amin’ ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na OMS ary ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny famatsiam-bola ny mponina na Fnuap no niara- nisalahy tamin’ny fananganana io toeram-pitiliana aretina io.
« Zava-dehibe ny fisian’ io ivon-toeram-pitiliana io satria ahafantarana ny isan’ny trangan’aretina homamiadana mpahazo ny vehivavy. Efa manakaiky ny vahoaka ihany koa ny fitiliana satria hopitalim-panjakana no misy azy. Tsy maintsy hisy ny hetsika fitiliana homamiadana faobe ato ho ato, ka vehivavy manodidina ny dimampolo amby zato hatramin’ ny telonjato no kendrena hanaovana izany » hoy kosa ny talen’ny hopitaly Hjra, ny profesora Rakoto Alison Olivat.
Efa misy eny amin’ny tobim-pahasalamana fototra ihany koa ny fitaovana tsotra ahafahana mitily ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza.
Loza mitatao Mamerina miantso vonjy ny mponina eny Ampasamadinika
Bakalorea Hivoaka raha afaka telo herinandro ny voka-panadinana
Fitsirihana tampoka Fiara an-jatony voasazy tany Avaratry ny Nosy
Fanohanana sy fanentanana Olona sivinjato norosoana sakafo mafana
ADY AMIN’NY TAZOMOKA :: Distrika sivy ambin’ny folo hofendrahana ody moka mahery vaika
ADY AMIN’NY ARETINA :: Raikitra ny herinandro afrikaninan’ny vaksiny
Fanasaziana sy Fanarenana Ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, voampanga ho nandoro tanety
Herisetra tao an-tokantrano Reny niaritra ny mangidy sy mafaitra mandra-pikimpy ny masony